1. Mazuva ano, kuve nechimiro chechiso Kana V-chef kumeso Izvo zvisinei kuti unozvitarisa sei, zvinotaridzika mune inoitika munguva ino Tora mifananidzo yakanaka sePangpuri Kunge nyenyedzi Ndiko kurota kwevechidiki Vanhu vazhinji vanosangana nedambudziko rekuzvimba kumeso. Iyo inozivikanwa zvakare se "hombe kumeso" iyo yakakonzera kushushikana Kana vamwe vanhu vanonyombwa kuti vasave nechivimbo mukutora mifananidzo kana kurarama Nhasi tine matipi makuru ekukubatsira iwe kuti uve nechimiro chakanakisa chechiso uye maitiro ekudzora huremu hwemeso izvo zvinoona kuti chero munhu anogona kuzviita pasina kuomerwa.
2. Exerca kumeso mhasuru tsandanyama nguva dzose, nyore kurovedza izvo zvinogona kuita mukati mezuva. Kana usati warara panguva dzekuda kuzorora Zvakakosha senzira yekuderedza huremu hwemeso. Unogona kuzviita wega. Pane matanho akareruka:
3. Tanga nekuisa zvanza zvinyoro nyoro patembere dzese. Ipapo sunga mazino acho zvakasimba kuti shaya isimbe. Dhinda muchanza cheruoko rwako kutenderedza tembere kuita denderedzwa kufamba 3 zvishoma uye zvakanaka kuti unzwe nyama dzosununguka.
4. Enderera neyechipiri pose Kutanga nekuisa indekisi, yepakati uye mhete yeminwe zvinyoro pamativi ese ematama edu. Wobva wanyemwerera zvinyoro nyoro, zvinyoro nyoro zvigunwe zvese zvitatu padama pamusoro, bata kwemasekonzi mashanu, wobva wadzokorora kakapetwa kagumi.
5. Ngatirambei tichienda panzvimbo yechitatu. Vhara muromo neruoko rwakanyanya Wobva waita matama kuzvitutumadza Wobva wafambisa mhepo mumuromo kudama rekuruboshwe. Enda padama rerudyi, uchiita kutendeuka gumi, uchizorora.
6. Nzvimbo yekupedzisira ndeyekuyamwa matama ese mumuromo mako uye bata muromo wako kwemasekonzi 5. Kana nguva yapera, tsamwa ukabata muromo wako kwemasekondi matatu zvakare Ko gumi rinotendeuka neshure munzvimbo yega yega mukuwedzera kuve nyore kuita. Uye pasina michina yakaoma Kana zvichiitwa nguva dzose Inobatsirawo kudzikisa mafuta kutenderedza kumeso Deredza kumeso kwemafuta, shandura kuita mhasuru, chimiro muchikamu nenzira iri nyore. Zvakakosha, usakanganwa kuzviita pamwe chete nekurovedza muviri kwemazuva ese.
7. Inwa mvura yakawanda Inokwana kusangana nezvinodiwa nemuviri, mvura yakakosha senzira yekuderedza huremu hwemeso. Nekuti inogadzira kutsva Batsira iyo yekugaya system Uye chengetedza maseru enhengo dzese dzemuviri kutsva uye shanda zvakajairika Vanhu vazhinji havanzwisise izvozvo Kunwa mvura yakawanda Zvinogona kukonzera edema yechiso nemuviri Izvo zvirizvo Kunwa magirazi matanhatu kusvika masere emvura yakachena pazuva, kunyanya usati wadya nemaoko. Simudza girazi rizere remvura yekunwa Pamusoro pekubatsira iwe kuonda Zororo muviri Idya chikafu chidiki Inokanganisawo kutsva kwemuviri zvakare
8. Deredza kunwa kwako zvinwiwa uye zvinwiwa zvinodhaka. Mitsara yebato inoda kurongazve hupenyu hwavo Unoda kuva nechiso chakaenzana muchikamu Nekuti doro rinoderedza muviri Uye kukonzera kuzvimba kumeso Kusvikira ganda risina kupenya, inwa zvishoma, asi nakidzwa nemhepo. Kune hutano hwakanaka unotonhorera
9. Chengetedza chikafu uye zorora. Pamusoro pazvo zvese kunze kwekutarisana nehuremu nzira Kusarudza chikafu chine fiber Uye mapuroteni akanaka akakosha.Wedzera mavitamini kubva kumichero ine hutano semapurosi, gwavha kana michero yemucitrus ine shuga shoma. Zvakakosha kuzorora zvakakwana. Izvo zvakanaka kune rako ganda uye hutano. Uye rarama nekunzwisisa kwenyika Nguva dzose wedzera simba rakanaka kwauri. Hazvisi izvo zvakaoma, ingo tarisa uye urangarire nezve hupenyu hwako. Edza kuunza dzimwe dzakareruka kumeso kurasikirwa nzira dzatinokurudzira kuti tione. Zvekuva nechiso chakajeka uye kujeka